स्थायी शिक्षक अस्थायीको परीक्षामा | Educationpati.com
२०७५ माघ ११ गते ०७:५५मा प्रकाशित
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, अस्थायी शिक्षकका लागि लिइएको आन्तरिक परीक्षाका प्रतिस्पर्धी स्थायी शिक्षक। यस्तै भएको छ, शिक्षक सेवा आयोगले लिएको अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने लिखित परीक्षामा।
आयोगका प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव डा. तुलसी थपलियाका अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २०७३ चैतमा विज्ञापन भएको थियो। आयोगले नै २०७१ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निमावि तहमा शिक्षक नियुक्तिका लागि छुट्टै विज्ञापन गरेको थियो।
आयोगका प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव डा. थपलियाका अनुसार नतिजा परिवर्तन भएकामध्ये प्राथमिक तहका १५, माध्यमिकका ३ र निमावि १ जना छन्। यति धेरै संख्यामा परीक्षार्थीको नतिजा परिवर्तन भएको घटनाले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही भएको भन्दै आयोगको आलोचना भएको छ। आयोगले भने मानवीय त्रुटिका कारण यस्तो भएको र सकेसम्म परीक्षालाई त्रुटिरहित बनाउन लागिपरेको दाबी गरेको छ।